ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အထည်ကြီးပျက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်သံ”
ဟိဟိ… တို့ လဲ အထည်ကြီးပျက်ပဲ… ကျွဲ အချက်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ… တကယ်ပါ… ဒီကကျွဲ ခုထိ မမြင်ဖူးသေးဘူး… ခုလောလောဆယ် နေမကောင်းနေတာနဲ့နေမကောင်းတဲ့ ဖီလင်နဲ့တခုထပ်ဖြည့်လိုက်ဦးမယ်… မြန်မာပြည်တုန်းက နေမကောင်းရင် ကြိုက်တဲ့စပယ်ရှယ်လစ် ခေါင်းခေါက်ရွေးပြီးပြလို့ ရတယ်… ဒီမှာတော့ အိမ်နားလေးက ဂျီပီမှာ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ …
တခါတုန်းကအနောက်နိုင်ငံသား NUS ကပါမောက္ခကြီးကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေကစင်ကာပူမှာဘာထူးခြားတာ သတိထားမိလဲလို့မေးတော့ ပါမောက္ခကြီးက အင်းးး.. ကျွဲနဲ့နွားကိုတရိစ္ဆာရုံမှာသွားကြည့်ရတာတော့ထူးခြားတယ်တဲ့.. အခုနှစ်တရုတ်နှစ်ကူးတုန်းကဆို နွားကြီးနဲ့ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့ 10 ပေးပီးတန်းစီရဆိုပဲ.. ကျွန်တော်တို့ဆီကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့လောက်ခက်သကိုးဗျ...
ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိဘူး၊ မြန်မာပြည်မှာ မြေကြီးပေါ်မှာ စိတ်ရှိလက်ရှိ ခြေချနင်းလို့ မြေဓာတ်ယူနိုင်တယ်။ ဒီမှာ နင်းစရာမြေကြီး စစ်စစ် ရှာရခက်တယ်။
ဒီ post မိုက်တယ်။ အမှန်တွေချည်းပဲ ဘာလို့ ရေးနေရတာလဲဗျာ။ :) Carry on.
တူတူပဲ ကိုပေါရေ ...
မြန်မာပြည်မှာတုန်း က ထမင်းဟင်းချက် အ၀တ်လျှော် မီးပူတိုက် အိမ်ရှင်း .. ကူဖော်လောင်ဖက် ကောင်မလေးတွေ ရှိတယ် ... ခု .. ကိုယ်တိုင် အဲဒီရာထူး ရနေတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတုန်းက ဟင်းကို တနေ့တခါ ချက်တယ်။ ခု ... တပတ်စာချက်ပြီး ဖရီဇာထဲ ထည့်စားနေရတယ်။
အဲ ... နောက်ဆုံးအချက် ... ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်း ဆိုတာ ... သီပေါမင်း ခေတ်ကို ပြောတာလားဟင်။ :)
ဟုတ်လိုက်လေ့... ဟုတ်လိုက် ဟုတ်လိုက် လေ...
(လူရွှင်တော်များ၏ အသံနေ အသံထားအတိုင်း သီဆို ရေရွတ်ပါရန်)
ကိုပေါရေ... အခုတော့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးကို
တချိန်လုံး ထမ်းထားရသလိုပဲ.. ဆိုလို့ ..
၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးသာ မထမ်းထားရင် တနေ့ ကို
၁၀ ပိုစ့် လောက် တင်မလားမသိဘူး.. တခါခါ အလုပ်တောင်ကောင်းကောင်း လုပ်သေးရဲ့ လားလို့ 
တန်ခူးရေ.... ကျနော်လည်း အဲဒါကို သတိရမိပါရဲ့။ နောက်တော့ အမြဲတမ်း အထူးကုမပြဖြစ်ခဲ့တာနဲ့...
ရွှေအောင်.... ခက်ပါဘူး ကိုရွှေအောင်ရ။ နောက်တခါ ဂန်ဘာရီ မြန်မာပြည်သွားရင် လက်ထောက်အနေနဲ့ လိုက်သွားပေါ့။ ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်လို့ရတယ်။
ခပ်မြင့်မြင့်... မြေဓါတ်ရသည်ဆိုသော်ငြား ကြည့်နင်းဖို့တော့ လိုပေသပေါ့။ မတော် ဖိနပ်မှာ တုတ်နဲ့ ခြစ်ချနေရမှ...
မေဓာဝီ... ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း လမ်းကို ပြောတာပါဗျိုး။း-)
သက်ဝေ... နောက်တမျိုးရှိသေးတယ်။ “ဟုတ်ပါပေဗျိုး၊ မှန်ပါပေဗျိုး။”
မောင်နိုင်.... ဒါရိုက်ဟစ်ပဲ။ အလုပ်မပြီးလို့ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးကို ထမ်းထားရသလို ဖြစ်နေတာပါ။
အတန်းထဲကဆရာကတော့ ပြောတယ်...သူတို့ zoo က world မှာ no3ဆိုလားဘာလား...
ထောက်ခံပါတယ်..... ၃ ကြိမ်
မှန်ပါတယ်......... ၃ ကြိမ်
အားပေးလျှက်....... ၃ ကြိမ်
မြန်မာပြည်ကနေ ခုမှ ကျောင်းလာနေတဲ့ ကလေးကသူ့မေမေကိုမေးတယ်.။ "မေမေ .. သားတို့ ဆင်းရဲသွားပြီလား" တဲ့..။
ဒီမှာ တိုက်ခန်းကို သူများတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ငှားနေရလို့၊ ကိုယ်ပိုင်ကားမစီးရလို့ ။
tats reality, dude. face it.
in Paris also, same diffrences ........and here car licences is more expensive then car prices, (in myanmar to get licences is about 10EUROS, on 2001)